Fotoana hanaovana ny fiovana lehibe sy famerenana lehibe: sonia ny fanangonan-tsonia: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 12 May 2020	• 22 Comments
Ny krizy corona dia manery antsika hieritreritra momba fiovana lehibe. Efa nanambara izany aho taorian'ny fidinan'ny tranokalan'ny DDoS nandritra ny antsasaky ny andro. Nanao fanambaràna mahatsiravina aho nilaza hoe: "Ny drafitra hataoko dia ny famolavolana drafitra mivaingana atsy ho atsy mba handrava sy handrava ity governemanta sy ny rafitra iray ity."
Efa niasa tao amin'io drafitra io aho nandritra ny fotoana maharitra ary naseho tamin'ny maro tao aoriany. Drafitra iray momba ny demokrasia mivantana izany, amin'ny alàlan'ny rafitra ara-pifidianana an-tserasera izay azo antoka amin'ny alàlan'ny teknolojia blockchain.
Eny, misy ny loza ateraky ny teknolojia, fa ny loza lehibe indrindra dia mipetraka ao amin'ny piramida. Ity rafitra ity dia mila tavela ary mihodina. Ity dia azo atao na oviana na oviana raha toa ka voalamina tsara. Tsy tokony ho any amin'ny toerana afovoany ny fahefana fa tokony ho any amin'ny vahoaka ny hery.
Izahay dia te-hanao hafa!
Hafa tanteraka! Ary ilaina ny fanampianao. Fanontaniana vitsivitsy voalohany:
Tianao hiaina ao amin'ny fonja nomerika ve ianao na ny zanakao?
Tianao ho terena hanao ny vaksiny iray ianao na ny zanakao tsy fantatrao hoe inona no zava-misy ankoatry ny zavatra lazain'ny "manam-pahaizana"?
Te-hoentina anaty rafi-kaominista miankina amin'ny fanjakana izay arahi-maso amin'ny alàlan'ny Big Data ve ianao?
Tsy misy? Izao no fotoana manara-maso ny rafitra araka izay fantatsika! Fotoana hisian'ny firenena malalaka miaraka amin'ny demokrasia mivantana: fomba vaovao iray iaraha-miaina. Fotoana hialana amin'ny kabinetra sy satroboninahitra.
Ny rafitra taloha dia miorina amin'ny demokrasia diso, izay ny saribakoly rehetra ao amin'ny antoko politika dia toa nofanina hampiany satroboninahitra fotsiny ary manolotra ny vahoaka ho an'ny tsinontsinona ny safidy.
Izy ireo dia manolotra safidy mifanaraka amin'ny vondrona tsirairay isaky ny hevitra sy ny tsiro rehetra ao amin'ny fiaraha-monina ary miady hevitra amin'ny alàlan'ny tsy fitovian-kevitra toa ny miaro ny fahefana sy ny fandaharan'asa ao ambadiky ny sehatra.
Ny mpanohitra, ankavia, ankavanana, liberaly, izy rehetra dia samy mivadika amin'ny satroboninahitra sy ny ady mafy amin'ny media, ny fifanakalozan-kevitra mandritra ny fifidianana; Izy ireo ihany no hampino ny vahoaka fa re ny feony.
Ny demokrasia araka ny nahafantarantsika azy dia ny halaviran'ny fiainantsika rehetra. Miaina amin'ny hypnose iombonana isika, fahajambana mifangaro.
Minoa fa afaka atao amin'ny fomba hafa
Satria miaina amin'ny rafitry ny fiaraha-monina hatramin'ny fahazazana isika dia tsy mahafantatra tsara kokoa. Ny fametrahana azy io no hifikirantsika.
“Mila governemanta fotsiny isika ary avy eo ny demokrasia no endrika tsara indrindra. Arakaraka ny voalamina tsara, ny mampitoviana ny fifanarahana ary ilaina ”, hoy izahay.
"Avy eo ny tsirairay dia mampiasa asphalt mitovy, manana fitateram-bahoaka tsara isika, milamina tsara ny hetra ary mety tsara isika amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika."
Ho an'ny sasany, ny akanjo ambony dia mitafy fitafiana tokoa
Ny olona sasany dia tsy mahita hoe tsy mitafy akanjo ny emperora. Mino mafy ny rafitra araka ny fantatsika azy ireo ary betsaka ny miankina ary mitia azy rehetra.
Amin'izao fotoana izao amin'ny krizy corona dia manomboka ny sasany mahita fa voatsangana tsikelikely ho amin'ny rafitry ny kaomionista teknolojia isika. Ny hafa hahita izany ho fivoarana ilaina; ny fandrosoana izay azo tohizana mba hisorohana ny fanabeazana ho an'ny làlam-pandrefesana ho avy sy hamonjy ny tontolo.
Fa moa izany ve dia mitaky ny mponina hapetraka ao anaty tranonkala mifehy ny teknolojia na ny ankamaroan'ny olana eto amin'izao tontolo izao vokatry ny olona manankarena be dia be no mahazo vola amin'ny fanafody, menaka, famokarana faobe sy ny sisa?
Ny tranon'ny mpanjaka dia nanana andraikitra tsara tamin'izany. Ny herin'izy ireo sy ny renivohitra dia indrindra amin'ny fanesorana ny akora sy ny solika. Tsy miresaka zavatra maizina intsony isika taloha.
Ary iza no mianiana amin'ny mpanao politika tsy mivadika? Ho 'satroboninahitra. Mianiana amin'ny tsy fivadihana herinaratra izy ireo izay manao sonia ny lalàna rehetra ary iza no mpitsara, tompon'andraikitra, mpisolovava ary polisy manao fianianana. Tsy mianiana amin'ny olona izy ireo fa ny satroboninahitra.
Io satroboninahitra io dia mitondra amin'ny alàlan'ny "fahasoavan'Andriamanitra". Tsy misy afaka haneho izany fahasoavan'Andriamanitra ary izany hery izany dia orona manitra.
Izy io dia rafi-pinoana izay iarahan'ny rehetra ao amin'ny fiaraha-monina, satria ray aman-dreny sy raibe, renibe sy namana: Samy manana ny lainga iray daholo ny rehetra ary noho izany dia tsy mahalala tsara intsony.
Afaka manohy miantehitra amin'ny rafi-pandresena isika, izay mihamafy hatrany raha toa ka afaka matoky isika fa raha mandray ny tenantsika isika dia afaka mandamina tsara ny zavatra. Tsy azontsika atao ny manary ny harena ara-teknika efa zatra lasa indray mandeha, tsy afaka ny hiaina tampoka tsy misy fotodrafitrasa sy fandaminana isika. Azontsika atao ny manova ny fitantanana sy ny fanapaha-kevitra.
Ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy ahitana solontena tena an'ny vahoaka izay mianiana tsy am-pahatoniana amin'ny satroboninahitra, fa amin'ny zanak'olombelona. Ny maha-olombelona dia tsy maintsy milaza mivantana amin'ny fanapahan-kevitra. Mino ve ianao fa tsy ho vita izany, satria be loatra ny olona tsy dia mahalala loatra ny zavatra maro samihafa? Izay ny arguse tsara, fa betsaka ny zavatra mila fanatsarana fotsiny.
Raha tsy te-hitombo ny tahan'ny olona dia tsy hisy ny fitomboan'isa. Raha mieritreritra ny olona fa manomboka miakatra hatrany toy ny fampielezan-kevitra ny haino aman-jery, dia tsy maintsy mihemotra izany. Raha tsy tevana sivana ny vahoaka dia tsy hisy sivana. Sy ny sisa, sy ny sisa.
Fanavaozana ny firafitry ny herinaratra
Fa ny zava-drehetra dia manomboka amin'ny famerenana ireo tsipika ny herin'aratra. Tsy maintsy mandeha mankany amin'ny vahoaka izy ireo fa tsy ho eo amin'ny satroboninahitra. Tokony hihazakazaka ho any amin'ny olona izy ireo; amin'ny zanak'olombelona. Ny governora voafidy mivantana amin'ny vahoaka dia tsy maintsy hofidina amin'ny alalan'ny fifidianana mivantana ary mianiana amin'ny tsy fivadihan'ny vahoaka izy ireo. Eo ihany koa ireo mpitsara, mpiasam-panjakana, polisy, miaramila, mpisolovava, sns. Ny rehetra dia tsy maintsy mianiana amin'ny tsy fivadihana amin'ny vahoaka ary azo alavan'ny maro an'isa.
Ny demokrasia mivantana dia azo tanterahana amin'ny alàlan'ny teknolojia. Ny teknolojia blockchain dia afaka miantoka fa afaka mamela ny feon'ny olona hiteny tsy am-pitenenana sy tsy misy toa azy ianao. Tsy hevitra kely tsy fantatra ve izany? Mety hisy fanohanana ve izao? Rehefa maheno ianao fa ankasitrahan'i Elon Musk dia maneno tampoka ny sofinao ve ianao?
Fifidianana avy amin'ny 'rahona'
Na iza na iza te-hifidy dia afaka handray anjara amin'ny fizotran-kevitra momba ny fanekena ny lalàna sy ny lalàna, ary manana daty lany daty izy ireo. Ny fifidianana dia atao amin'ny alàlan'ny solosainao na amin'ny telefaona mifandray amin'ny karazana kara-panondro. Voalohany indrindra dia tokony handinika indray ny lisitry ny lalàna misy ankehitriny isika: 'mety mijanona' na 'tsy maintsy mandeha'. Eny, fanamafisana sy fahatsorana fa tsy fahita volo ankehitriny.
Pro's sy con's
Midika koa izany fa mila mametaka multinationals lehibe isika miaraka amina rafitra iray mampitaha. Raha ny marina dia tokony hialana amin'ny herin'ny olona toa an'i Bill Gates isika. Ny fiverenan'ny herinaratra mitovy ihany dia mety hitranga ao.
Ny con's dia mora lisitra. Tokony hampiadana ny teknolojia sy ny angon-drakitra lehibe isika ary izany no fomba hamahanana an'ity rafitra ity.
Tsy i Elon Musk ve izay te hanantona ny atidohantsika any anaty rahona ary hampifandray azy amin'ny AI. Moa ve ny vavahadin'i Bill tsy nangataka paten 2020-060606 mba hahatonga ny atidohantsika ho sakana ao amin'ny blockchain? Eny, saingy afaka mifidy an'izany isika. Azontsika atao ny manalefaka ny teknôlôjia ary mangataka ny mpivoatra AI tsy hanome an'i AI maimaim-poana.
Mety ho sarotra amin'ny maro ny mametraka ny lalàna rehetra na ny fanapahan-kevitra eo amin'ny vahoaka. Avy eo ny olona dia hanana asa isan'andro mandritra ireo fanapahan-kevitra rehetra ireo ary hanjavona amin'ny farany. Na izany aza, azo atao ihany koa ny manome lanja na hotsarain'ny mpitsara noho ny fahatsorana sy ny tsy fitoviana fa tsy ny fifangaroan'ny volon'ondry izay efa zatra antsika avy amin'izy ireo ankehitriny. Noho izany dia tsy maintsy mandefa asa tsotra sy mazava izy ireo ary noho izany dia mila karazana mpamily maro samihafa izahay.
Ny toa tsy maharatsy dia tokony hitondra fiovana tsara: ny fitsipi-dàlana dia miainga amin'ny halehiben'ny kalitao.
Ny fampandrosoana dia azontsika atao ny mametraka ny brakes amin'ny scaling sy sentimentation ary miala amin'ny fahasarotana hatrany amin'ny fahatsorana. Projet iray hafa dia ny ahazoanay tena solontena tena olona fa tsy olona miafina mitokana ny vola be sy ny satroboninahitra. Ny fisolo tena ny olona dia tsy maintsy lasa ny tena dikan'io teny io.
Izany no anaovanao an'izany
Atombohy amin'ny fandavana ny rafitra tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana misy antsika izao. Ny tsy misy fototra dia manohitra ny zo fototry ny olombelona.
Ny lalàm-panorenana dia nosoniavina tamin'ny satroboninahitra, ary ny lalàna dia nosoniavan'ny satroboninahitra koa. Ao anatin'ny krizy corona, hitantsika fa matetika ny governemanta tsy miraharaha ny lalàm-panorenana ary mamorona haingana lalàna vaovao izay hihoatra ny lalàm-panorenana. Mila miverina amin'ny foto-kevitra momba ny zo fototra isika fa tsy ny fitsipiky ny lalàna. Miorina amin'izany zo fototra izany, ny tsirairay dia manana ny zony mitovy. Izay no mahatonga ny demokrasia mivantana no vahaolana.
Ny dingana 1 dia noho izany ny rafitra taloha miorina amin'ny satroboninahitra ary mandà ny fisehoan'ny demokrasia. Midika izany fa ny fahazoana ny toeran'ny fahefana izay heverintsika fa misy dia tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana. Tsy misy ny fahasoavan'Andriamanitra ary tsy maintsy misy fianianana amin'ny vahoaka.
Midika izany fa afaka mandà ny sazy, ny fifehezana ary ny sazy amin'ny toerana isika:
“Tsy misy manam-pahefana amiko, satria ny lalàm-panorenana sy ny lalàna dia voamariky ny satroboninahitra. Io satroboninahitra io dia miorina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny andrim-panjakana rehetra toy ny fitsarana, ny manam-pahefana, ny fanaraha-maso, sns., Dia mianiana amin'ny tsy satro-boninahitra. Ny mpitsara rehetra, ny mpanao politika, ny tafika, ny polisy ary ny hafa rehetra dia mianiana amin'ny tsy satro-boninahitra. Tsy manana fahefana aminay izahay ”.
Ny dingana voalohany dia ny mandà fahefana rehetra, ny mandà ny sazy sy ny sazy ary ny mandà ny andraikitry ny hetra. Tokony halainay ny rafitra taloha.
Raha tonga any amin'ny fitsarana ianao dia afaka manondro ilay mpitsara fa mianiana amin'ny tsy satro-boninahitra izy (noho ny fahasoavan'Andriamanitra) ary noho izany dia tsy manam-pahefana aminao. Azonao atao ny manondro ny lalàna nalaina avy tamin'ny satroboninahitra (fahasoavan'Andriamanitra). Afaka mandeha ianao.
Manangana rafitra vaovao izahay, amin'ny famoahana ny fanangonan-tsonia izay nosoniavin'ny olona maro araka izay azo atao eto amin'ny tranokala. Izany fangatahana izany dia alefa any amin'ny governemanta nanongam-panjakana sy ny satroboninahitra ary nanambara fa tsy maintsy mametra-pialana izy ireo.
Mijanona tsy mijery tele izahay, mihaino media sy mpanao politika, ary tsapanay fa fitaovana iray eo an-tanan'ny tompon'andraikitra ihany koa ny haino aman-jery sosialy.
Lavinay ny herin'ny governemanta eo an-toerana, ny governemanta nasionaly ary ny Brussels ary manomboka hatrany am-boalohany.
Afaka mitohy ny ministera ary mila mamoaka tatitra momba ny fitantanam-bola ihany izy ireo. Ny mpitondra ao amin'ireny ministera ireny dia tsy maintsy mianiana amin'ny tsy fivadihana amin'ny vahoaka ary manomboka manomboka mandinika ireo fepetra sy lalàna mifehy ny fahalalahana.
Ny minisiteran'ny Fitantanam-bola dia tokony haseho amin'ny fanitika ny bokotra iray izay ao anatin'ny vilan'ny hetra ary firy ireo trosa.
Ireo trosa ireo dia tsy maintsy nolavina ary natao isaina. Nifamadika avy hatrany izahay tamin'ny bitcoin ary namela ny euro sy ny dolara. Ny hery sy ny fitaomana ny Banky Eoropeana sy ny banky hafa koa dia tokony hihena. Nanonta vola tsy misy na iza na iza izy ireo ary feno vola ny rafitra vola mirehitra.
"Tsy maintsy esorina avy hatrany ny trosa nasionaly ary natao ho an'ny zero."
Omena fahafahana hanokatra kaonty bitcoin mandritra ny 1 herinandro ny olona ary nametraka avy hatrany ny olon-drehetra miaraka amin'ny 1 bitcoin ny minisiteran'ny Fitantanam-bola.
Ny Bitcoin dia manome ny fandrakofana. Tsy misy vola misimisy kokoa, fa vola sandoka vaovao, izay bitcoin no "fenitra volamena" vaovao.
Mahazo fidiram-bola fototra ny tsirairay. Mitovitovy amin'ny rafitra kômonista ankehitriny izay tantanan'ny governemanta ankehitriny, fa satria ny tsipika mitondra herinaratra mankany amin'ny vahoaka ary tafatsangana ny demokrasia mivantana dia mihena ny risim-bolan'ny governemanta totalité.
Ireo mpivarotra sy orinasa dia omena iray volana hametrahana rafitra iray ahafahana mandoa ny vola bitcoin, fa manaiky avy hatrany ny fifanakalozana bitcoin mivantana amin'ny fomba fandoavana.
Ny departemanta anatiny dia omena 1 volana hananganana rafi-pifidianana mivantana blockchain, izay ahafahan'ny besinimaro handefa lalàna ho an'ny vahoaka ho fandavana na hojerena.
DigiD azo ampiasaina hifidy, fa ny fahazoana tarehimarika an-tsoratra amin'ny alàlan'ny fanekena ny tarehy na ny taratasy fanamarinana vaksiny dia azo eken'ny besinimaro fotsiny.
Ny lalàna rehetra misy dia tsy manan-kery avy hatrany. Izahay dia hanisy fe-potoana ivelan'ny fotoana iray. Nampitsahatra ny asan'izy ireo avy hatrany ireo mpisolovava, mpitsara, tafika, polisy ary mpitsara.
Ny minisiteran'ny atitany dia tsy maintsy manolotra rafitra fandatsaham-bato blockchain ao anatin'ny iray volana, izay ahafahan'ny vahoaka manendry azy ireo avy hatrany.
Hisy olom-boafidy 1 isaky ny ministera ary afaka hifidy amin'ny ankamaroan'ny vato avy amin'ny rafi-pifidianana blockchain.
Ireo mpitarika vaovao ireo dia tokony hanomboka avy hatrany ary hitatitra isan-kerinandro amin'ny vahoaka amin'ny alàlan'ny fifandraisana mivantana amin'ny YouTube na media sosialy hafa.
Avy hatrany izy ireo dia manao topimaso mikasika ny habetsaky ny lalàna ary miantoka fa ravana ny volavolan-dalàna sy ny habetsaky ny lalàna ankehitriny ary fintinina amin'ny isa izay avo indrindra dimampolo isaky ny minisitera.
Ny fitsipika fototra vaovao dia atolotra ho an'ny vahoaka ho toy ny 'fitsipika fiarahamonina' vaovao amin'ny alàlan'ny fitsipika sy famintinana teny 1000.
Mety mankasitraka, mandà na hamerina ireo 'làlan'ny fiaraha-monina' ireo amin'ny alàlan'ny rafi-pifidianana blockchain ny vahoaka mba hamerenana.
Ny haino aman-jery dia tokony hatsahatra avy hatrany ny fandaharana vaovao sy fandaharana ifanakalozana. Tsy maintsy misy ny fampitam-baovao manontolo mandra-pahafahan'ny olom-peon'ny vahoaka vaovao ny rafitra iray.
Noho izany dia tsy maintsy mandinika akaiky ny rafitry ny media sy ny gazety rehetra izy ireo ary manome antoka fa ny olona no miasa fa tsy ilay filaharana efa napetraka taloha.
* fanamarihana ambany pejy
Mijanona kely ny fanakatonana ny tamberan'ny hetra. Mampiato izany. Avy aiza daholo ireo olona an'arivony tapitrisa avy amin'ireo rehetra heverina fa hanampy ny mponina mandritra ny krizy corona? Tsy misy na aiza na aiza ilay vola. Ny rafitra ara-bola manontolo dia miorina amin'ny vola maimaimpoana (tsy rakotry ny zavatra vita an-batana sy tsy misy dikany.)
Mazava ho azy fa tsy famaranana ny fametavetana ny haba momba ny hetra. Miato vonjimaika, mandra-pahatongan'ny solontenan'ny vahoaka vaovao (izay tena misolo tena ny vahoaka) amin'ny toerana misy ny ministera ary afaka manadio sy mamerina indray ny rafitra iray manontolo.
Ny faran'ny hetra dia tsy ho farany, fa ny rafitra kosa mila manadio avy amin'ny an'arivony miliara mankamin'ny EU sy mankany amin'ny ECB.
Ahoana ny fomba hampiharana izany? Izany dia manomboka amin'ny fanangonan-tsonia mazava, izay ahafahanao maneho ny tenanao fa tianao ny fanovana. Afaka miteny ny fahatsiarovan-tena sy fifohazana isika, saingy ny fiovana tokana dia avy amin'ny hetsika. Vakio ireo teboka avy amin'ny fanangonan-tsonia ary avereno avy eo ny vatonao. Miaraka isika dia afaka manao fanovana ary manomboka amin'ny ezaka ataontsika manokana izany rehetra izany.
Amin'ity fitakiana ity dia manambara izahay:
Fa ny satro-boninahitra dia tsy manan-kery
Tokony hametraka avy hatrany ny andraikiny ny governemanta
Ny lalàna sy ny lalàna rehetra dia tsy manan-kery sy havaozina avy hatrany
Mihantona avy hatrany ny fampiharana rehetra
Mihantona avy hatrany izany hetra izany
Tsy mety ny karama ary ajanona ny fanangonana
Fa ny polisy, ny mpitsara, ny tafika, ny mpitsara, ny mpitsara, ny inspektera ary ny mpiasam-panjakana rehetra dia tsy maintsy mianiana amin'ny vahoaka
Tsy mety ny trosa nasionaly
Tsy azo antoka ny fitakian'ny trosa nataon'ny ECB sy ireo mpampindram-bola hafa
Fa hisy demokrasia mivantana (toy voalaza eto)
Miaraka amin'ity fanangonan-tsonia ity no takianay:
Fampitsaharana avy hatrany ny hetsika nataon'ny mpanjaka, mpanjakavavy, mpikambana ao amin'ny efi-trano voalohany sy faharoa ary mpikambana ao amin'ny kabinetra
Fampivoarana mivantana - ary ny fanaterana ao anatin'ny 1 volana - ny rafi-pifidianana blockchain nataon'ny minisiteran'ny Fitantanam-bola, izay ahafahan'ny solontena vaovao voafidy (solontena iray isaky ny ministera, hotendrena sy hifidy amin'ny alàlan'ny rafitra mifidy blockchain)
Ny minisiteran'ny Fitantanam-bola dia mametraka vola 1 isan-taona ao anatin'ny Holandy ao anatin'ny 1 herinandro
Fitsarana ampahibemaso ny satroboninahitra sy mpanao politika amin'ny alàlan'ny rafi-pifidianana blockchain, ao anatin'izany ny sehatra sy ny votoatin'ny sazy
Koa mandehana any amin'ny tranokala vaovao izao, sonia ny fanangonan-tsonia ary / na tonga mpikambana.
Tsy misy intsony ny kabinetran'ny demokrasia Rutte III
Tags: blockchain, krizy corona, ny satroboninahitra, demokrasia, mivantana, Featured, asa fanompoana, mpanao fanompoam-pivavahana, fanangonan-tsonia, politika, politika, fifidianana, teknolojia, fiovana
12 May 2020 amin'ny 21: 57
Hitako bebe kokoa izany ho toy ny foto-kevitra ho an'ny tanjona farany hanamafisana kokoa, fa tsy zavatra ampiharina eo no ho eo. Azo antoka ny korontana, raha manao izany ianao. Ajanony ny hetra? Vonjeo avy hatrany ny mpiasam-panjakana amina tapitrisa, tsy misy asa, tetikasa marobe izay ampanaovina olona an-jatony maro no ho tonga, hijanona tsy ho ela, manomboka ny sidina renivohitra goavana (raha tsy hoe mandray anjara daholo izao tontolo izao), sns.
Ny fiovan'ny dingana isan-karazany noho izany dia toa mahomby kokoa ny fahombiazako. Ianao dia mila mizaka tanteraka ny fanomezana ny fampahalalana, izany hoe ny fampahalalam-baovao. Raha mila manapa-kevitra amin'ny zava-drehetra ny vahoaka dia mila mahazo antoka ianao fa mahazo tantara tsy mitanila momba ny fahasamihafana sy ny vokatry ny fanapahan-kevitra tsirairay izy ireo. Saingy matahotra ny toetran'ny olombelona aho, izay mifanohitra amin'ny karazana fiovana rehetra, ary tena miraiki-po. Azonao atao ny mitadidy be dia be fa raha, ohatra, dia misy lalana vaovao tsy maintsy hamboarina any amin'ny toerana iray, ary mahazo olona sasany manoloana ny fakan-tsary mitaraina izy ireo fa eo akaikin'ny tranony izy ireo, na amin'ny alàlan'ny ala, 90 amin'ny 100 ny olona no hifidy AGAINST.
Ary dia ho toy ny miaraka amin'ny tetikasa maro izany, hoy aho. Matahotra aho fa tsy ho be dia be hiala any an-tanety intsony ary tena hiafara amin'ny rafitra kominista mahazatra ianao izay ho tena mitovy amin'ny Firaisana Sovietika, ampiarahina amin'ny teknolojia mandroso. Tsy mieritreritra aho fa tontolo tsara kokoa hiaina.
Araka ny hevitrao, toa anao, ny rafitra ankehitriny dia nanana ny fotoany tsara indrindra, ary iharan'ny kolikoly, ny nepotism ary ny karazana lobby isan-karazany izay omena fahefana be loatra. Na izany na tsy izany dia toerana tena efa lany andro ny Royal Family (na dia mety hijanona ho karazana 'ministera' an'ny Holandey-Promotion na -Folklore aza ny wmb, na dia misy aza ny fahefana rehetra). Ka tsy maintsy hafa izany, fa aparitaka fa afaka 10 na XNUMX taona teo ho eo, izay heveriko fa tena haingana, noho ny fikorontanana lehibe tsy maintsy hitranga. Ny olona iray, olona iray, dia tsy maintsy hiatrika izany ara-tsaina.
12 May 2020 amin'ny 22: 40
Mazava ho azy: tsy maharitra ny andraikitry ny hetra.
Avy aiza daholo ireo olona an'arivony tapitrisa avy amin'ireo rehetra heverina fa hanampy ny mponina mandritra ny krizy corona?
Tsy misy na aiza na aiza ilay vola. Ny rafitra ara-bola manontolo dia mifototra amin'ny vola maintso (tsy voasaron'ny zavatra ara-batana sy ambany)
Mazava ho azy fa tsy famaranana ny fametavetana ny haba momba ny hetra. Izany no mahatonga azy io milaza ihany koa hoe 'nampiato'. Miato vonjimaika, mandra-pahatongan'ny solontenan'ny vahoaka vaovao (izay tena misolo tena ny vahoaka) amin'ny toerana misy ny ministera ary afaka manadio sy mamerina indray ny rafitra iray manontolo.
Ny faran'ny hetra amin'ny hetra dia tsy ho farany, fa tsy maintsy hodiovina amin'ny fantsom-po an'arivony tapitrisa maro mankany amin'ny EU sy ny ECB.
Mieritrereta kely indray.
12 May 2020 amin'ny 22: 53
Ny fanazavana tsara momba ny vola mavesatra (manindrona ny fihomehezana kely)
12 May 2020 amin'ny 22: 58
Ary izao dia mbola
12 May 2020 amin'ny 23: 06
Ary ny marina, tsy mino ny fanovana miandalana aho, mety ho mavesatra ary tsy maintsy atao haingana izany. Ny singa iray lehibe ao amin'ity dia ny herin'ny herin'aratra dia tokony hiodina avy any ambony ka hatrany ambany. Tsy maintsy manana fanambarana mivantana ny vahoaka ary tsy maintsy raikitra tanteraka ny rafitra. Ny fanamorana dia fanalahidy.
13 May 2020 amin'ny 00: 59
Martin, raha azoko tsara ny fanoritsoritana ny firafitra mifanitsy izay miatrika ny fampiatoana ny lalàm-panorenana efa misy "Amin'ny anaran'ny vahoaka". Midika izany fa faran'ny ny fitsipiky ny lalampanorenana, izay tarihan'ny antsoina hoe "demokrasia parlemantera". Ka Repoblika iray…
Eny, nieritreritra foana aho fa rafitra hafahafa feno fifanoherana izany. Nandritra ny lesona momba ny siansa sosialy tao amin'ny Gymnasium, ny mpampianatra dia tsy maintsy namaly ny fanontaniana tsotra hoe "Ahoana no fomba hananganana demokrasia raha manao fianianana ny satroboninahitra?" Aiza aho no afaka mijery ny lalantsara .. kely dia niova teo amin'io lafiny io.
12 May 2020 amin'ny 23: 35
Tsy maintsy handray anjara amin'ny revolisiona tahaka izany ihany koa ireo orinasa ary indrindra amin'ny sehatry ny toe-bola. Eto dia afaka miverina amin'ny rafitra iray izay lasa tompona fatiantoka isika. Ny fifidianana, ohatra, bonus, politikam-bola ary olana lehibe hafa dia azo atao amin'ny alàlan'ny blockchain. Aorian'izany dia azo ovaina ny sehatra hafa. Ny iray amin'ireo olan'ny ankehitriny amin'izao fotoana izao dia ny fisian'ny multinasionalisma marobe mamaritra ny politikam-panjakana. Mino aho fa tokony handamina izany amin'ny dingana voalohany.
12 May 2020 amin'ny 23: 54
Ny vahaolana anananao dia vahaolana tsara miaraka amin'ny teknolojia ankehitriny. Fa manontany tena aho raha haharitra ve io vanim-potoana ara-teknolojika io. Efa hitantsika ny fahitana mialoha voalohany. Hanome an'izao rehetra izao fa haverina ny zava-drehetra. Ny satelita an'i Elon dia hijanona tsy hiasa intsony, hidina ny Internet, tsy maintsy hiverina any amin'ny fototra ny olona. Egoism dia tsy ho velona amin'ny ambaratonga avo kokoa.
Efa eo amin'ny fotoana izay hahatsapantsika ny toe-javatra isika. Manameloka ny hafa isika fa ny tenantsika ihany no mandoa izany. Manana rafitra miasa amin'ny Microsoft izahay rehetra. Izahay rehetra dia mandoa hetra izay manome vola an'i Willy, Rutte ary ny ady.
Mila miaiky ny fanamelohana fotsiny isika ary manana vahaolana toa anao, ny fomba hanafahanao ny tenanao.
Marina ny anao, anjaranay izao. Ny tanjon'ny fisiantsika dia ny miasa amin'ny tenantsika. Mahasambatra sy mankasitraka ny tenanao sy ny fanahinao ary avelao ny fanahinao manjaka ny fitorianao.
Raha tsy mandinika ny tenanao ianao dia hisy olon-kafa hanao izany!
14 May 2020 amin'ny 00: 57
misy tokoa ny ohatra maro izay efa misafidy ny paikady stratejika na koa ny fanoloana ny dikan-dizitaly.
13 May 2020 amin'ny 09: 20
Tsy afaka manampy fa manaiky
fa iza no handeha hiaraka aminay?
Tsy mandeha an-tsitrapo izy ireo ary misy takelaka A4 feno fangatahana?
Tsy maintsy tonga saina aloha ny kianjan'ny Crown, eny, eny
fa raha tsy izany dia revolisiona fotsiny?
13 May 2020 amin'ny 09: 30
Ny mahaliana dia ny hoe te hisian'ny revolisiona ny olona, ​​nefa tsy mino izy ireo fa tokony ny revolisiona ihany isika.
Azonao atao ny mampihatra izany amin'ny fametrahana modely demokratika mivantana. Midika izany fa tsy maintsy mihetsika ny tenanao.
Mimenomenona izahay ary milaza fa tsy manao na inona na inona ao amin'ny The Hague. Mitaraina amin'ny fanehoan-kevitra toy ny: "Aiza ny antoko mpanohitra!?"
Ny hany fanovana marina dia afaka ary tokony tena ho avy amin'ny fampiavana ny tenanao. Dia dingana iray tsy dia lavitra loatra ho an'ny maro.
Te-hamaky izay ratsy amin'ny fanidy aho, ratsy amin'ny vaksiny ary ratsy momba an'i Bill Gates, fa ny fampahalalanao ny tenanao dia tampoka lavitra be.
13 May 2020 amin'ny 09: 47
Zava-dehibe ny mahatakatra ny fotokevitra fototra amin'ny vola azo. Manana vola tsy azo antoka ianao izay vita pirinty tsy misy fetra ary tsy misaron-tava (toy ny amin'ny fotoan'ny krizy) ary noho izany dia miteraka hyperinflation (antsoina koa hoe 'fiatatam-bola') na manana vola mifamatotra amin'ny fenitra iray ianao, toy ny volamena na menaka. Ny fenitry ny solika OPEC nanomboka dia nirodana, ary ny vidin'ny solika dia lasa ratsy. Navoaka ny fenitra volamena taona lasa izay. Toa Bitcoin no fenitra vaovao.
Indray dia misy ny loza ateraky ny fanitarana, mitambatra miaraka amin'i AI, fa amin'ny dingana iray izay toa tsy ho vitany ny mijanona intsony dia azonao atao ny mamadika ny piramida.
Ity misy fanazavana momba ny fiasan'ny "fenitra volamena" toy izao:
13 May 2020 amin'ny 09: 57
"Vola voaroy" na "vola tsy azo antoka" dia ny vola tsy azo ny sandany azo avy amin'ny fitaovana nanaovana azy (tombam-bidy toy ny volafotsy volamena sy volafotsy), fa avy amin'ny fahatokisana fa afaka mividy entana sy serivisy izy io. Noho izany ny lanjan'ny mpifaninana dia tsy miankina amin'ny lanjan'ny metaly sarobidy, fa amin'ny fahatokisana fa ny mpandraharaha ara-toekarena dia manome ny sandan'ny vola.
Amin'izao vanim-potoanan'ny krizy corona ity dia mihena ny vidin'ny volabe. Toe-javatra tsy azo antoka izany.
13 May 2020 amin'ny 11: 29
Misy ifandraisany mivantana ny vola sy ny heriny. Raha tsy misy ny miaramila amerikana sy ny fahaizana manapa-kevitra ny ady dia tsy ho lafo be ny dolara. Ary mazava ho azy ny fahavononan'ny tafika amerikana, ny miaramila, ny hitazomana ny hegemony amerikana amin'ny dolara.
13 May 2020 amin'ny 10: 09
Jereo ny farany ambany ambany fa imbetsaka ny volamena, volafotsy ary crypto no amidy (amin'ny taratasy). Midika izany fa, ohatra, dia olona 173 mangataka volafotsy 1 oz, 172 no nividy rivotra. Ny sandan'ny volafotsy any Etazonia dia $ 2615, ny sandan'ny sandam-bola amin'ny dolara dia 👻
Bass Ruigrok nanoratra hoe:
13 May 2020 amin'ny 12: 36
Ny antony mahatonga ny WW2,
National Socialism dia namorona rafitra ara-bola maimaim-poana izay namarana ny trosam-bolam-panjakana ary namily ny banky….
Noho izany dia mandainga momba ny Alimanaka Sosialista Nasionaly i Jerman.
Alao sary an-tsaina ny hatezerana rehefa takatry ny olona fa ny rafitra tsara indrindra dia nopotehin'ireo antsoina hoe lasibatra.
Ambony etsy ambany, tsara dia ratsy, mpamono olona no iharany.
Toy izany koa i Ghadaffi sy Saddam Hussein niezaka nanao ...
13 May 2020 amin'ny 16: 22
Tsara an'i Martin.
Mipetraka ny fanontaniana, ary indrindra ny fomba hahitanao ireo polisy sy miaramila. Tokony hahazo izany ianao. Tsy takatro mihitsy ny antony hamonoanao olona tahaka ny miaramila. Amin'ny ady izay tsy fantatrao fotsiny ny tena anton'ny ady. Ny baiko sy ny fitenenana diso.
Mbola afaka miombon-kevitra amin'ny polisy aho, saingy na dia ny lehiben'ny lehibenareo aza dia milaza aminao ny hanao fihetsiketsehana. Izaho amin'ny firenena rehetra.
Ankoatr'izay, izay noheveriko ary efa tratranao koa. Jensen dia freemason fotsiny. Ka ny 1 amin'izy ireo dia mijery izany aho amin'ny fahafinaretana rehefa mihinana. Fa tsy mifono amin'ny tsy tantarany izany lehilahy izany. Aza hadino fotsiny ny momba an'i Trump.
Avy eo ny tantaran'ny No Style dia tsy mamela ny anarany intsony amin'ny fihetsiky ny olona. Ary tsy maintsy manoratra an'i Jansen na Jensen ianao fa izy dia 33. Vita izay, ary ho adala ihany koa. Jensen dia voalaza fa nosakanan'ny GS. Saingy manome ohatra an'i Jensen 33 ianao. Ary naka ny tadiny manontolo izy. Ary koa ilay horonantsary voafafa misy sary manodidina ny 180.000, vakio ny isa Masonic 9. Ary ireo fihetsika rehetra ireo dia tsy anininona. Zazalahy mampatahotra sns Etc sns.
16 May 2020 amin'ny 09: 22
apetrany eo amin'ny toerana tsy hiposahan'ny masoandro ny fahasoavan'Andriamanitra. Mijanona ho teatra ho an'ny besinimaro tsy nahalala ..
16 May 2020 amin'ny 23: 14
Tahaka ny fampiatoan'ny Mpanjakavavy ny Parlemanta Britanika tamin'ny Aogositra 2019, izay amidy amin'ny haino aman-jery raha toa ka Boris Johson izay nangataka alalana tamin'ny mpanjakavavy. Saingy, ao amin'ny lalàm-panjakan'i Angletera dia manana fahefana voatokana (montsiora) ny mpanjaka rehefa nanoro hevitra ny filankevitra privat ny mpanjaka.
17 May 2020 amin'ny 13: 23
"Lalànan'ny besinimaro" nateraky ny olon-tsotra (motherfuckers), ambonin'ny lalàna ny mpanjakavavy ary ny idd dia mifehy fotsiny ny Commonwealth (Canada, Australia, NZ sns). Tahaka ny Madurodam dia mbola monarchie lalam-panorenana misy amin'ny teatra parlemantera (miresaka ny tendany).
16 May 2020 amin'ny 14: 44
18 May 2020 amin'ny 13: 49
Sarimihetsika iray tsara tarehy sy saika mampihetsi-po. Maherifo izay saika manambara ara-bakiteny izay tao amin'ity tranokala ity nandritra ny taona maro. Saika ara-bakiteny, satria miantso «hery ambony kokoa» hiova.
Mety hanana finiavana tsara indrindra io ramatoa io, saingy indrisy fa tsy hanova na inona na inona ao amin'ny andrim-panjakana izay nanaovany an'ity kabary ity.
Araka ny lazain'i Martin, ny tena fiovana dia avy ao anaty. Raha tena avy amin'ny tenany ny lahatenin'ity ramatoa ity, dia tsara ho an'ny kandidà minisitra ao anaty rafitra vaovao voalaza etsy ambony
« Lahatsary nalain'i Dr. Plandemic Judy Mikovits dia karazana horonantsary hosoka vaovao (horonantsary)
Ny famaritana vola lehibe mandritra ny krizy corona dia mitarika amin'ny hyperinflation: ny bitcoin ve no vahaolana? »
Total fitsidihana: 2.429.018